ချစ်ကြည်အေး: အွန်လိုင်းသင်္ကြန် ဘလော့ဂ်ဂါတို့ သင်္ကြန်
ခါတိုင်းဆို လိုင်းပေါ်မှာ မရှိတတ်ပေမဲ့ ခုတလော လိုင်းပေါ်မှာ အနေများနေပြန် တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှ ကိုယ့်ကို မမြင်အောင် မီးခိုး ရောင် အကျီင်္ီလေး ဝတ်လို့ တိတ်တိတ်လေး လူလုံး ဖျောက်နေ နေတတ်တယ်။ တယောက်ယောက်များ အစိမ်းရောင် ဝတ်စုံကလေး တလွင့်လွင့်နဲ့ တက်လာလို့ကတော့ ပုန်းနေရာကနေ ဝုန်းကနဲ ထွက်၊ ဗြန်း ကနဲနေအောင် ရေလှမ်းပက်တော့ တာ။ ဟိုခမျာ ကြောင်အ အ ဖြစ်နေတုန်း အိုးမဲဆီလူးထားတာနဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေး တဖက်ပါ ဆွဲပေး လိုက်သေးတာ။ ပြီးမှ ကိုယ်ရောင်ဖျောက်လို့ တပြုံးပြုံးနဲ့ တယောက်ထဲ ကွန်ပြူတာကြီး ကြည့် ရင်း သဘောတကျ....။ ဒါကို ခြုံခို တိုက်ခိုက် တဲ့ နည်းပဲ ပြောကြပါတော့။
နောက်တနည်းကျပြန်တော့ အစားနဲ့ မျှားတဲ့နည်း။ "မုန့်လုံးရေပေါ်လေး OOOOOOOOO OOOO စားပါအုံးလား" ဆိုတော့ တဖက်လူမှာ ပီတိတွေဖြစ်ပြီး မုန့်လုံးရေပေါ်လေးတွေ တလုံး နှစ်လုံး ရေကြည့်နေတုန်း ဝုန်းကနဲဆို ခွက်စောင်းခုတ်၊ မျက်နှာကို ရေမြှုတ် စပရေးနဲ့ မှုတ်ပစ် လိုက်ပြီးမှ ကိုယ်ရောင်ဖျောက် ပြီး တဟီးဟီးနဲ့ ချောင်းကြည့် သဘောကျနေတတ်ပြန်တာ။
ဘလော့ဂ်တွေလည်၊ စီဘောက်တွေထဲမှာ ရေခဲရေတွေနဲ့ ပက်၊ အိုးမဲတွေ သုတ်၊ ခွက်စောင်း တွေ ခုတ်၊ အိမ်ရှင် ဧည့်ခံထားသမျှ မုန့်တွေ စားပြီးမှ ကိုယ့်အိမ်ပြန်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကိုယ့်အိမ်လေးလည်း ရေထဲမျော၊ စီဘောက်တွေလည်း ကြွက်စုတ်ရေမွန်း ဖြစ်ရှာလို့ရယ်...
ဒါပါပဲ...။ ဒါကျမတို့ ဘလော့ဂ်ဂါ သင်္ကြန်ပေါ့...။ အဝေးရောက်သင်္ကြန်ကို အဝေးရောက်မြန်မာ တွေက အွန်လိုင်းနဲ့ ဘလော့ဂ်တွေပေါ် မှာပဲ ဆင်နွှဲကြ၊ ရေပက် မုန့်ကျွေးကြ၊ သံချပ်တွေ ထိုးကြနဲ့ ပျော်ရွှင် ရင်ခုန်စွာ တမက်တမော လိုလားစွဲလန်းစွာ ကျင်းပကြလေရဲ့......
အပြင်ထွက်နိူင်သူတွေကတော့ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေ၊ မြန်မာအသင်းအဖွဲ့တွေ တချို့ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ သင်္ကြန်အတုလေး တခု ဖန်တီးယူခွင့် ရကြပါတယ်။ အတုဆိုတာ အစစ်လောက် မကောင်းပေမဲ့ သစ်မရခင်စပ်ကြား ဝါးပေါင်းကွပ် ဆိုသလို ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရွာရဲ့ သင်္ကြန်အစစ် ရနံ့ကို မှန်းဆလို့ လွမ်းကြရတာပါပဲ။
တကယ်ဆို ကျမက ရေကြောက်သူပါ။ ကလေးတုန်းက ရေဆော့သလောက် အရွယ်လေး ရောက်လာတဲ့အခါ သူများတွေ ရေဆော့တာကို မဏ္ဍပ်နောက်က ငေးကြည့်ရင်း ပျော်နေခဲ့ ရုံလောက်ပါ။ ဒီကြားထဲကမှ ကားပေါ်က လူနောက် တချို့ ဆင်းလာပြီး ရေလာလောင်းမှ စိုခဲ့ရ တာ။ အချမ်းလည်းကြောက်တာမို့ ဂျာကင်ထူထူ မချွတ်တမ်း ဝတ်ခဲ့တာ မှတ်မိနေတုန်းပါပဲ။
သင်္ကြန်ဆိုတာက အားလုံး သိကြတဲ့ အတိုင်း လူကြီးလူငယ် အရွယ်မရွေး ကလေးအစ ခွေးအဆုံး ပျော်ကြတာ။ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ပျော်ကြတာ ။ မသိသူရော သိသူရော လမ်းမှာတွေ့ရင် စ နောက် ရင်းနှီးတတ်ကြတာ၊ အာဃာတ ရှိသူချင်းတောင် ပြေလည် ပေါင်းစည်း စေတတ်တာမျိုး မဟုတ်လား။
များသောအားဖြင့် အချမ်းခံနိူင်အောင်ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တပ်လို့ မူးကြ၊ တနှစ်တခါ မို့လို့ဆိုပြီး အပျော်လွန်လို့ ရူးကြသူတွေ ချည်းပါပဲ။ ဒီတော့ စိတ်ရောကိုယ်ပါ လွတ်သွားကြတဲ့အခါ ယာဉ်တိုက်မှုတွေ၊ ရန်ပွဲတွေ၊ အသေအပျောက်တွေလည်း ပွဲတော်ပြီးတဲ့အခါ စာရင်းထွက် လာတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကလည်း နှစ်စဉ် ဖြစ်နေကျပါလေ။
ဒါပေမဲ့ ခုလို ကျမ စာရေးပြီး ပြောနိူင်တဲ့ အခွင့်အရေး ရှိနေချိန်မှာ သင်္ကြန်ပျော်မဲ့ ကလေးတွေ ကို တခုလောက် ပြောပြချင်တယ်။ လူငယ်ပီပီ ပျော်ကြပါ၊ ရူးကြ မူးကြပါ ဒါပေမဲ့ အန္တာရာယ် ဖြစ်စေလောက် တဲ့ အပျော်မျိုးတော့ ရှောင်ကြစေ ချင်ပါတယ်။ သင်္ကြန်ရက်တွေ ဆိုရင် အိမ်က မိဘတွေဟာ သားသမီး အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုမှ ရင်ထဲက အပူလုံး ကျရတတ်တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေအားလုံး စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ စံနစ်တကျ ပျော်တတ်ကြစေချင်ပါတယ်။
စည်းကမ်းရှိတဲ့ သင်္ကြန်၊ ကျက်သရေ ရှိတဲ့ သင်္ကြန်ကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲရင်း နှစ်သစ်ကို မင်္ဂလာရှိစွာ ကြိုနိူင်ကြပါစေရှင်...
ကိုဇော် Wed Apr 14, 10:13:00 PM GMT+8
ချစ်မကြီးရေ. . .
ငယ်ငယ်ကတော့ ကဲပေါ့ဗျာ. . .အခု အသက်ကြီးလာမှ ဆော့ကို မဆော့တတ်တော့တာ. . .သူများတွေ ဆော့နေတာကို ကြည့်ပြီး မဏ္ဍပ်ပဲ ထိန်းနေရတော့တယ်။
ဆော့နေတဲ့ အထဲမှာ ကိုယ့်ထက် ကြီးတဲ့ သူတွေတောင်မှ ပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က ပျော်ပေမဲ့ မကဲတတ်တော့ဘူး။
ငယ်ငယ်ကလိုတော့ ပြွတ်လေးနဲ့ ပြိုင်ပြီး ထိုးချင်မိသား. . .
ကဲကွာ . . . စာဖတ်နေတုန်း. .အလစ်မှာ အိုးမည်း သုတ်သွားတယ်။ ပကျိ. . ပကျိ . . .ပြွတ်လေးနဲ့လည်း ပက်သွားတယ်။
ကိုရင်နော် Wed Apr 14, 10:23:00 PM GMT+8
အွန်လိုင်းပေါ်က သင်္ကြန်က.. ပျော်တတ်ရင် ပျော်စရာကြီးပါ..
ဥပုဒ်မပျက် တချက်ချက် လုပ်လို့ ရတာပေါ့..
ရေလည်း မစို တအိုအို လည်း လုပ်လို့ရသေး..
ချမ်းလည်း မချမ်း တဗွမ်းဗွမ်း လည်း လုပ်ကုန်တယ်...
YouTube ကနေ အလန်းလေးတွေ အလန်လေးတွေလည်း ကြည့်ရသေးတယ်ဗျ..း)))
မောင်မိုး Wed Apr 14, 10:23:00 PM GMT+8
ပက်..ပက်...တုန်ဘူးဆို..တုန်ဘူးဆို..ပက်...။ တုန်ဘူးဆို..တုန်ဘူးဆိုပက်...။ မူးနေဘီဂျ.။ တနေကုန် အိမ်မှာပဲသောက်မူးပြီး သင်္ကြန်ကျလိုက်ရတယ်။ ဟင့်.။
Moe Cho Thinn Thu Apr 15, 07:28:00 AM GMT+8
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Thu Apr 15, 08:26:00 AM GMT+8
ဇွန်မိုးစက် Thu Apr 15, 11:43:00 AM GMT+8
ဟောဒီမှာ... အစ်မချစ်တစ်ယောက် အလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်ဘဲ သူများတွေကို ရေလိုက်ပက် အိုးမည်းသုတ်နေပါတယ်ဗျို့.... လို့ တိုင်ပြောလိုက်မှာနော်။ :P
rose of sharon Thu Apr 15, 02:40:00 PM GMT+8
on line သင်္ကြန်ကို လာအားပေးသွားတယ်နော်
~ဏီလင်းညို~ Thu Apr 15, 03:00:00 PM GMT+8
အနော်လေ... ဘယ်မှ မသွားဘူးသိလား.......
(ကိုင်းလာလေရော့....... ရေပက်လိုက်ဦးမှ ......ဗွမ်းးးးးးးးးးးးးးးး....... ဗွမ်းးးးးးးးးးးးးးးးး......း))
နှစ်သစ်မှာ အစစ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေဗျား..........
sosegado Thu Apr 15, 04:43:00 PM GMT+8
on line သင်္ကြန်ပဲ ကြနိုင်ပါတယ်
မြသွေးနီ Sat Apr 24, 12:10:00 PM GMT+8
မချစ်ကို နောင်နှစ်မှ ရေပက်တော့မယ်နော်။